Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Molluscum contagiosum ရေကြွက်နို့
Molluscum contagiosum ရေကြွက်နို့
Doctor, is Molluscum Contagious was what kind of lumps? How to call in Myanmar? Can you please explain me in Myanmar. I check on Google but I didn't understand all. Because I am nanny of two little boys and they got Molluscum. They treatment with laser but can't help. I am worried and want to know what that means in Myanmar.
• Molluscum contagiosum ဆိုတာ မြန်မာလို သိပ်မသိပါ။ Water warts ခေါ်လို့ 'ရေကြွက်နို့' လို့ ဘာသာပြန်နိုင်တယ်။
• အရေပြားတွေမှာဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါတမျိုး ဖြစ်တယ်။ အရေပြားနုတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• ပိုးတွေက MCV-1 ကနေ -4 အဖိ ၄ မျိုးရှိတယ်။ MCV-1 ကအများဆုံးဖြစ်ပြီး MCV-2 က လူကြီးတွေမှာဖြစ်တယ်။ လူချင်းထိမိရာကနေ ကူးစက်တယ်။ အဝတ်အစားတွေကနေ ထိမိရင်လဲ ကူးနိုင်တယ်။ အဖုလေးတွေပေါ်လာတာကို ထိမိ ကုပ်ထဲမိရာကနေ တနေရာကနေတနေရာကို ပြန့်မယ်။ လူကြီးတွေမှာဖြစ်ရင် လိင်အတူနေလို့လဲ ကူးစက်နိုင်တယ်။
• အသက် ၁ဝ နှစ်အောက် အဖြစ်များတယ်။ ကိုယ်၊ လက်၊ ပေါင်ခြံ၊ ခြေထောက်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။
• အဖုလေးတွေပျောက်သွားတဲ့အထိ ကူးစက်နိုင်တယ်။ ဆေးမကုရင် အဖုတွေက ၄ နှစ်လောက်အထိ ကျန်နိုင်တယ်။
• Potassium hydrochloride နဲ့ Cantharidin ဆေးတွေ လိမ်းပေးရမယ်။
• Tea tree oil လက်ဖက်ပင်ဆီလဲသုံးတယ်။
• Salicylic acid ကိုလဲသုံးကြတယ်။ ထိရောက်မှု မသေချာပါ။
• Tretinoin cream လိမ်းတာသက်သာတယ်။
• Imiquimod ဆေးက ခုခံအားနည်းစေတဲ့ဆေးကိုလဲ သုံးတာရှိတယ်။
• Cryosurgery အေးခဲခွဲစိတ်နည်းလဲ လုပ်တယ်။
• Laser လေဆာနည်းလဲလုပ်တယ်။
• ပျောက်ဘို့ ၆ လ ကနေ ၉ လအထိကြာနိုင်တယ်။ ၂ နှစ်နေမှပျောက်တာလဲရှိမယ်။
• Curettage ခြစ်ပေးနည်းလဲ လုပ်တယ်။
• ကြွက်နို့ကိုသုံးတဲ့ဆေးတွေကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။